Iindaba -Ungawuphucula njani amava oMsebenzisi kwiWebhusayithi yakho ye-E-Commerce
Xa kuziwa kwiwebhusayithi yakho ye-e-yorhwebo, ukubonelela ngamava omsebenzisi olungileyo (i-UX) kuthatha okungaphezulu kunoyilo olujongeka kakuhle.
Kubandakanya izinto ezininzi, zonke zisebenza kunye, ukunceda abantu abahamba kule ndawo bajikeleze kwaye bafumane into abayifunayo. Ukusuka kwiinkcukacha zemveliso ukuya kubume bewebhusayithi, nganye yezi zinto kufuneka yenziwe kunye nomgangatho we-UX engqondweni.
Ngaba ukulungele ukufunda okungakumbi? Ukuba kunjalo, qhubeka ufunda.
Khokela abatyeleli bakho kwiMveliso eKhanya kuwe okanye kwiiNgcebiso ngeNkonzo
Ngeengcebiso ezenzelwe wena zemveliso, ungakhokela abasebenzisi bakho kwezona mveliso zibalaseleyo kwaye ubancede bafumane ezintsha.
Oku kuyakunceda ukwandisa inani labo le-odolo kunye nokwenza i-UX engcono. Oku kuyafana nokuba nommeli womntu ngaphakathi enikezela abathengi iingcebiso ngemveliso.
Ngokudibana nokubonelela ngezindululo, unokwenza amacandelo "ahamba phambili" okanye "awona mthengisi aphambili". Oku kuzakusebenza ngokubonga okungcono kubungqina boluntu ababonelelayo. Ikwenza abathengi bakholelwe ukuba ukuba abanye abantu bayazifumana ezi mveliso, inokuba licebo elilungileyo ngesizathu- ezi zinokubandakanya ezona zinto zithengwayo. Wonke umntu ufuna ukuba yinxalenye yeendlela zamvanje.
Enye indlela yokusebenzisa iingcebiso kukuthengisa okanye ukuthengisa iimveliso. Ngokuthengisa, ungabonisa abantu abatyelele iisayithi zakho njengeemveliso ezikumgangatho ophezulu.
Ngokuthengisa umnqamlezo, ungabonisa naziphi na iimveliso ezincedisayo eziza kunceda ukuphucula amava akho emveliso iyonke.
Yenza indawo elula yokuKhangela kunye neWebhusayithi eQokelelweyo
Khawufane ucinge ukuba ungene kwivenkile ethengisa izinto zasekhaya ukufumanisa ukuba yonke into ixubekile kwaye akukho myalelo.
Ungaziva njani? Ulahlekile, ucaphukile, ukhathazekile? Kwenzeka into efanayo kubatyeleli bewebhusayithi ye-e-commerce ukuba indawo yakho yokuhambisa indawo ingaphantsi. Kuya kubathatha ixesha elide ukufumana iimveliso abazifunayo, kwaye kwenze kube nzima kubo ukufumana ezintsha
Into onokuzibuza yona, nangona kunjalo, yeyiphi into elungileyo yokukhangela kwiwebhusayithi? Oku kuxhomekeke ekubeni ngubani umthengi ofanelekileyo kwaye bathenga njani. Yiyo eya kuthi ichonge ulwahlulo lwemveliso oyisebenzisayo, iindidi ozisebenzisayo, kunye nento oqaqambisa kuyo kwimenyu ephambili. Nangona oku kuyinyani, kukho iindlela ezimbalwa ezifanelekileyo ongayisebenzisa ukunceda ukuphucula i-UX.
Inyathelo lokuqala kukukhetha iindidi zemenyu ephezulu. Ukuba uthengisa izinto zabasetyhini kunye nezamadoda, ezi ziya kuba ziindidi eziboniswe phezulu, kunye neemveliso zodidi oluphezulu.
Olunye uqheliso olululo kukusetyenziswa kweefilitha. Oku kuzokunceda umntu afumane izinto abazifunayo. Ezinye zezona ziqhelekileyo zibandakanya ubungakanani, umbala, ixabiso, kunye nodidi. Ezi zihluzo zinokunceda ukugcina umkhangeli ixesha elininzi kwaye zenze ukuba inkqubo yokuthenga ibe lula kwaye ibe mnandi.
Oku kunokuba yinto enokuthi iqela lakho lolawulo lwenethiwekhi likwazi ukunceda.
Cela kwaye umamele Ingxelo yoMthengi
Nokuba ulandela zonke ezona ndlela zilungileyo, kuya kuhlala kukho into onokuyenza ngcono.
Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuba ufune ingxelo yabathengi. Oku kuyakwazisa iindawo ezifuna ukuphuculwa kwaye yintoni enokukunceda wenze utshintsho olufanelekileyo. Kwezinye iimeko, abathengi banokunika iingcebiso ngeendawo ekufuneka ziphuculwe, eziza kukunceda ugcine ixesha ngokubhekisele kwinto ekufuneka uyenzile okanye oza kuyitshintsha.
Kukho izinto ezimbalwa eziya kuqinisekisa inkqubo yempendulo enempumelelo. Enye yezi zinto zenzekelayo. Unokwenza ii-imeyile zesicelo sakho seempendulo ziphume emva kokuba umntu ethengile okokuqala okanye emva kwexesha elithile lidlulile. Oku kuyakunceda ukuqinisekisa ukungqinelana kwaye ikuvumele ukuba ulinganise le nkqubo.
Ukuba awusebenzisi oomatshini abazenzekelayo, kuya kufuneka uthumele ezi imeyile ngexesha elinye, xa ukhumbula. Le yinkqubo engasebenziyo nechitha ixesha.
Kuyimfuneko ukubonelela ngenkuthazo kuye nawuphina umthengi onika ingxelo. Oku kunokuba sisipho sasimahla okanye ikhowudi yesaphulelo. Le yindlela entle yokukhuthaza abantu abaninzi ukuba bakuxelele oko bakucingayo. Kukho iinkqubo ezininzi onokuzisebenzisa ukunceda ukwenza le nkqubo ibe lula kwaye ikuncede ulandele iziphumo, ezinokudityaniswa namanye amaqonga ezentengiso e-e, aquka i-Shopify.
Emva kokuba uqokelele yonke ingxelo, ungabonisa iingcebiso kunye nolwazi phantsi kweemveliso okanye kwiindawo ezahlukeneyo zesiza. Oku kuya kukunceda ufumane ukuthembela ngakumbi kubakhenkethi abatsha.
Ukuba ufumana ingxelo engalunganga, qiniseka ukuba ulandelela umthengi onganelisekiyo ukuze abazise ukuba umcimbi wabo uyalungiswa.
Nikezela ngokuGcina kuluhlu lwe-Wishlist
Ngamanye amaxesha, ukongeza into kwinqwelo kunokuba kukuzibophelela kwivenkile ekwi-Intanethi.
Ngelixa banokufuna into, banokufuna ukuqhubeka nokukhangela izinto ezahlukeneyo ukuyithelekisa nayo. Okanye, banokungaqiniseki ngento ethile kwaye bafuna ukuyigcina ukuze bayithenge ngelinye ixesha.
Nokuba sithini na isizathu, ukubonelela ngokhetho kuluhlu lomnqweno kumthengi ukugcina imveliso yindlela elungileyo yokunciphisa uxinzelelo oluhamba nokufaka into kwinqwelo.
Ukuba awuboneleli ngolu khetho, abathengi banokukhumbula into abayithandayo kwaye bazame ukubafumana kwakhona ngexesha elahlukileyo. Oku kubangela umsebenzi omninzi kumthengi kwaye kunciphisa i-UX iyonke. Kwakhona, xa uphumeza ugcino kuluhlu lweminqweno, unolwazi lomsebenzisi.
Nje ukuba bacofe eli qhosha, ungabasa kwifom yobhaliso elula ukuqinisekisa ukuba ukhetho lwabo luyagcinwa.
Ngaba Indawo yakho ye-E-Commerce isebenzise uMhlobo?
Le yinto ekufuneka ayithathele ingqalelo umnini ndawo nganye. Ukuba impendulo ngu-"hayi ", kunokuba luluvo olulungileyo ukwenza utshintsho oluthile.
Ukwenza njalo kuya kukhokelela kubathengi abonwabileyo kwaye, ngenxa yoko, ukuguqulwa okungakumbi. Qiniseka ukuba uyigcine engqondweni kwaye usebenzise iingcebiso ezilapha ngasentla kwiziphumo ezilungileyo.